Home » Vaovao momba ny fizahan-tany an'ny governemanta sy ny sekolim-panjakana » Asa tsy andoavam-bola: Espaina no tsara indrindra ary Etazonia no ratsy indrindra » Page 2
Na izany aza tsy ny firenena rehetra no tsara vintana rehefa miresaka fialantsasatra ary isaky ny herinandro fiasana dia mety miovaova be. Miankina amin'ny toerana misy anao sy ny lalàna eo an-toerana, ny ora maharitra dia manomboka amin'ny 35 ora mandritra ny 5 andro, hatramin'ny 48 ora mandritra ny 6 andro.
Firenena ambony ho an'ny fotoana karama
1. Espaina - 39 andro
Ary koa ny fitsangatsanganana isan'andro, ny Espaniôla dia manangona fialan-tsasatra 25 andro karama isan-taona mandoa isan-taona. Ny mpampiasa dia tsy afaka manolo ny fialantsasatra amin'ny fanonerana ara-bola, midika izany fa tsy maintsy raisina avokoa izy ireo. Misy 14 ihany koa ny fialantsasatra ampahibemaso, izay didin'ny governemanta Espaniola. Na izany aza, tsy tafiditra ao anatin'ny fetin'ny fialantsasatra farafahakeliny izy ireo ary manolotra fiatoana azo ekena. Anisan'izany ny Fetin'ny Noely, ny Taom-baovao, ary ny Fetim-pirenena Espaniola amin'ny Oktobra.
2. Austria - 38 andro
Ny mpiasa ao Aotrisy dia mety miasa isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma herinandro, fa ny mpiasa rehetra dia mahazo andro fiasana 25 miasa isan-taona. Izy ireo koa dia mahazo fialantsasatra 13 fety miparitaka mandritra ny taona. Amin'ny ankamaroan'ny orinasa lehibe, raha 25 taona ny asa fanompoana maharitra ataon'ny mpiasa, dia mitombo 35 isan-taona ny karama fialan-tsasatr'izy ireo.
3. Failandy - 36 andro
Matetika ny Finnà koa dia maka fialantsasatra herinandro amin'ny ririnina, na amin'ny Krismasy na amin'ny fiandohan'ny lohataona rehefa manao fialantsasatry ny ririnina ny ankizy. Ny olona mipetraka any dia mazàna mahazo fialan-tsasatra 25 andro isan-taona ho an'ny fialantsasatra isan-taona ary ny ankamaroan'ny mpampiasa dia manolotra andro 11 karama fanampiny mandritra ny fialantsasatra ampahibemaso na ara-pivavahana.
4. Suède - 36 andro
Ny lalàna momba ny fialan-tsasatra any Suède dia manome taratry ny an'i Failandy, indrindra raha ny fialantsasatra ampahibemaso sy ara-pivavahana. Ny mpiasa rehetra any Suède dia manan-kery hanana andro fiasana fialan-tsasatra 25 isan-taona, na firy taona na karazana asa.